Abaxhasi be-Hydration bladder bag abavelisi kunye nababoneleli - China Hydration bladder bag factory
I-Hydration Bladder Backpack Ukunyuka kweHiking Running
Elona qabane lilungileyo kwiingxowa zangaphandle zokuhambisa amanzi, beka ibhegi yakho ye-hydration kubhaka, kwaye ulungise ityhubhu yokutsala kwibhanti yamagxa. Ungawuzalisa ukufuma nanini na kwaye naphi na kwaye ukhulule izandla zakho. Nokuba uyakhwela, ubaleka, unqumla ilizwe, okanye uhamba ngebhayisikile awuyi kuchaphazeleka.
IChibi eliNgaphandle leBlackder Backpack ebalekayo yokubaleka ukukhwela ibhayisikile
Iimveliso zezemidlalo zangaphandle ezinokuthi zenze iqabane elifanelekileyo ngeebhegi zamanzi. Eyenzelwe ngokukodwa iingxowa zamanzi ezemidlalo. Ungasonga ngokugqibeleleyo kwaye uphathe ibhegi yakho yamanzi. Ikuvumela ukuba uphathe ibhegi yakho yamanzi xa ungaphandle, ngaphandle kokongeza umthwalo kuwe. Ikuvumela ukuba ugcwalise kwakhona imithombo yamanzi nangaliphi na ixesha ngaphandle ukugcina ukusebenza komzimba.
Inombolo Umba: WBB-001
Ubukhulu: 45 * 21cm
Amanzi aphathwayo esinyi ubhaka oBomvu
Ibhegi yamanzi eyilelwe kakuhle, awunako ukubeka kuphela ibhegi yamanzi kwindawo yangasemva, kodwa ubeke iibhotile ezimbini zamanzi ezithambileyo kwindawo yesifuba, okuphucula kakhulu ukubanakho kwezixhobo zamanzi.
Yangaphandle Hydration Bladder ubhaka for Camping Ukuhamba ngebhayisikile
Xa uhamba ngebhayisikile, ubaleka, unyuka, okanye unqumla ilizwe ngaphandle. Kufuneka ufumane ikhaya lengxowa yakho yamanzi ukuze ukwazi ukuzikhulula izandla zakho kwaye ujonge kwimithambo yakho. Izinto zenayiloni kunye noyilo olugqwesileyo zibonelela ngokulula kwimithambo yakho.
Ephathekayo Ingxowa yaManzi
Ibhokisi yokukhwela ibhayisikile yangaphandle. Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-nylon PET. Isithuba esikhulu somthamo, ubhaka wokuphefumla, olula kwaye ongenobunzima, onganyangekiyo, olungele ukusela. Ukuhamba nemithwalo yakho emqolo, intle kwaye iyaphatheka, kulula ukuya emfazweni.
Ingxowa yaManzi yaNgaphandle yeMidlalo
Ingxowa ye-nylon yelaphu ye-hydration ingabamba iilitha ezili-11 zomthamo omkhulu kwaye iyilo olunobunzima be-0.2 kg. Ikuvumela ukuba uyithwale kancinci emqolo xa usenza yonke imidlalo yangaphandle. Ibhegi yokuhambisa amanzi kunye nengxowa yamanzi zihlala zingamaqabane amahle. Ukudityaniswa kwezi zinto zimbini kuya kukuzisela olona lwazi lungcono lwezemidlalo ngaphandle.